मिन्स (महिनावारी) भएको कति दिनमा बच्चा रहन्छ ? – Ujyaalo Patrika
मिन्स (महिनावारी) भएको कति दिनमा बच्चा रहन्छ ?
विभिन्न सामाजिक परिवर्तनसँगै यौ,नसम्बन्धी विचारमा पनि केही खुलापन आएको छ, तर पनि विवाहपूर्व शारी,रिक सम्पर्क अझै पनि एक किसिमले वर्जित नै छ । विवाहपूर्व यौ,नस,म्पर्कका आ–आफ्नै समस्या हुन सक्छन् ।
के महिनावारी हुँदा शारी,रिक सम्पर्क गर्न हुन्छ
कतिपय समाजमा महिनावारीका बेला शारी,रिक सम्पर्क गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा छ । महिनावारी भएको बेलामा स्वस्थ पुरुष तथा महिलाको बीचमा हुने शारी,रिक सम्पर्क लाई वर्जित गर्नुपर्ने कुनै वैज्ञानिक कारण छैन ।
तपाईंलाई थाहा छ भने महिनावारीको रगतको स्रोत पाठेघर हो र पाठेघरको मुखमा भएको सानो प्वालबाट यो रगत बाहिर आउँछ। पाठेघरको मुखले हत्तपत्त बाहिर आइसकेको कुरालाई यहाँसम्म कि कतिपय सूक्ष्मजीवलाई पनि भित्र जान दिँदैन। शारी,रिक सम्पर्क गर्दा योनिरसको सम्पर्कमा लि, ङ्ग आउने कुरा त तपाईंलाई पनि थाहै होला ।
त्यसैगरी थोरै भए पनि लि, ङ्गबाट आउने रसको स,म्पर्कमा यो, नि पनि आउँछ। स्वस्थ व्यक्तिको बीचमा भएको यौ,नस,म्पर्कमाआउने यस किसिमको रसले हानि गर्दैन । महिनावा,रीका बेला आउने रगतलाई कतिपयले फोहर रगत मान्छन्, तर त्यो सत्य होइन ।
महिनावा,रीमा आउने रगत फोहोर होइन भनेर सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । शरीरबाट आउने रसको सम्पर्कमा आउँदा खराबी नहुने तर रगत आउँदा विशेष रूपमा खराबी हुने कुरा भन्ने कुरा अलि मिल्दो भएन । यसको कारणले डर लागेको भए चिन्ता नलिए हुन्छ ।
पाठेघरमा बच्चा बस्न वा गर्भरहन थुप्रै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ। सन्तानको उत्पत्ति प्रमुख रूपमा पुरुषबाट निस्कने शु,क्रकीट र स्त्रीमा विकसित भएका डि,म्बको मिलनबाट हुन्छ ।
शारी,रिक सम्पर्कका बेला पुरुषको वी,र्यस्ल,खलन हुँदा निस्किएका करोडौं शु,क्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डि,म्बबाहिनी नलीसम्म पुग्छन्। त्यहाँ परिपक्व भएको डि,म्ब अ,ण्डासँग असंख्य शु,क्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ ।
एउटा महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा के भने डि,म्ब निस्किएको यस्तै १४ दिनमा महिनावारी सुरु हुन्छ। यस्तै २८ दिनको महिनावारी भएको महिलाको १४ औं दिनतिर डि,म्ब निस्कने भएकाले यस समयमा स,म्भो,ग गर्दा ग,र्भ रहने अर्थात् बच्चा बस्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ ।
Previous मिन्स (महिनावा,री) भएको बेला शारी,रिक सम्पर्क गर्न हुन्छकि हुदैन ?
Next शारी,रिक सम्पर्क गर्दा स्त,न मिच्ने कि नमिच्ने ? यस्तो छ डाक्टरको सल्लाह